कपिलवस्तुमा एक बर्षभित्र झन्डै १७ हजार सवारीलाई कारबाही ।। – मोफसल खबर
June 20, 2021 2:28 am
कपिलवस्तुमा एक बर्षभित्र झन्डै १७ हजार सवारीलाई कारबाही ।।
कपिलबस्तु, ९ भदौ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले गत आर्थिक वर्ष १६ हजार ८७ सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ । ट्राफिक नियम उलंघन गरी सञ्चालनमा रहेको सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको जनाएको छ ।
जिल्ला ट्राफिकले गत अ.व. २०७६÷०७७ मा १६ हजार ८७ सवारी साधनलाई कारबाही गरेवापत ८८ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक टक्कर स्वारले जनाए । ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक स्वारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कूल २८ हजार २ सय २० सवारी कारबाहीमा परेका थिए, जसबाट १ करोड ५६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
जसको तुलनामा १२ हजार १ सय ३३ ले करवाहीमा पर्ने सवारी संख्यमा कमि आएको देखिन्छ । सवारी कारबाही भएका मध्ये सबैभन्दा बढी ट्रक रहेका छन् । ट्रक मात्र ११ हजार ५ सय ६५ वटा कारबाहीमा परेका छन् । भने दोस्रोमा मोटरसाईकल १ हजार ९ सय ८७ वटा कारबाहीमा परेका छन् । त्यसैगरीे कारबाहीमा परेका जीप र कार १ हजार १ सय ७६ वटा, बस ६ सय ८३ वटा रहेका छन् । भने ट्रेक्टर ५ सय १४ र अटोरिक्सा १ सय ६१ वटा गरि कूल १६ हजार ८७ सवारी कारबाहीमा परेकोे बताईएको छ ।
विगत भन्दा अ.व. २०७६÷०७७ कारबाही सवारी संख्या र राजस्व संकलन घटनु स्वाभाविक रहेको बताइन्छ । सवै सवारी साधनका अ–आफ्ना समिति तथा नीति नियम रहेकाले सवारीले नियम उलंघन गरे उनीहरुले दोहोरो जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै चैत्र महिना देखि अहिले सम्म नै लकडाउनले गर्दा राजस्व असुल कम हुनु ट्राफिक प्रहरीको भनाई छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने २२ जना कारबाहीमा परेका जसबाट मात्रै २२ हजार ४ सय राजस्व संकलन भएको छ । ट्राफिक नियम उलङ्घन गरी सिट भन्दा बढी यात्रु बोक्नु, ओभरलोड र मापदण्ड विपरीत कार्य गरेका सवारीलाई कारवाही गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु गोरुसिङ्गेले जनाएको छ ।
विदेशमा सिकेको सीपले स्वदेशमा आत्मनिर्भर ।।
सहकारीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ः सदस्य केसी ।।
नेप्से झण्डै १५ अङ्कले बढ्यो